ဆေးခြောက်တကယ်သင့်ရဲ့အိုင်ကျူနိမ့်ပါဘူး? - သတင်း Rule
အကြှနျုပျ၏မကြာသေးမီကသုတေသနပြုချက်ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုထက်အခြားကွဲပြားမှုသိမြင် function ကိုအတွက်အများကြီး-ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ညီမျှမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်အကြောင်းတည်းပြတော်မူပြီ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဆေးခြောက်တကယ်သင့်ရဲ့အိုင်ကျူနိမ့်ပါဘူး?” ကို Claire Mokrysz ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 14 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 15.24 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဆေးခြောက်ကို အသုံးပြု. သိမြင်မှုဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ဖြစ်စေမသုတေသနနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက ကျယ်ပြန့်မီဒီယာအာရုံစိုက်မှု အပေါ်ဆေးခြောက်၏ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများအကြံပြုကြောင်းတွေ့ရှိချက်မှခွင့်ပြု သိမှတ်ခံစားမှု, ဦးနှောက်ကို function ကို နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး, သင်တစ်ဦး spliff ဆေးလိပ်အကြိမ်ကြိမ်ဧရာ Bong နှင့်အတူဦးခေါင်းကျော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို bashing ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ခဲ့စဉ်းစားဘို့အပြစ်မှလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း. သို့သော်, ယနေ့အထိအလုပျတာ Cross-အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက (ကြောင်း, တိုင်းတာလူတစ်ဦး၏အသက်တာ၌တစ်ကြိမ်မှသာယူကြသည်), ကျွန်တော်သူတို့ဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြုပြီးစတင်မီကဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကကွဲပြားခြားနားဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပေသည်ရှိမရှိမသိနိုငျ. တိုတိုပြောရရင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးဂန္ "ကြက်သားသို့မဟုတ်ဥ" ပြဿနာနှငျ့ရငျဆိုငျနေ.
ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုဟာလေဟာနယ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်ပါဘူး. ထိုအခါလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှဆေးခြောက်ကိုစတင်သုံးစွဲတဲ့သူဆယ်ကျော်သက်နီးပါးဆက်ဆက်ကြိုးစားကြည့်ပါဘယ်တော့မှလိမ့်မည်သူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်, ထိုသို့သို့မဟုတ်သူတို့သည်အဟောင်းတွေအထိနှောင့်နှေး. အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှဆေးခြောက်ကိုစတင်သုံးစွဲသောသူတို့သည်မကြာခဏရှိသည်သောအကြံပြု လျော့နည်းတည်ငြိမ်တဲ့နောက်ခံ နှင့် ပိုပြီးအမူအကျင့်ပြဿနာများ သူတို့ရဲ့ Non-သုံးပြီးရွယ်တူထက်. ဆယ်ကျော်သက်ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုလည်းပုံမှန်အားဖြင့်နှင့်အတူလက်တော်၌လက်ဝင် ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အန္တရာယ်များလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှု. ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများက၏ဆင်းရဲတဲ့သိမြင်မှုဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ထို့ကြောင့်ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အခြားအချက်တွေကနေဖြစ်ပေါ်စေမည်, အစားဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုကိုယ်တိုင်ကထက်. သို့သော်သူကဤသူအပေါင်းတို့သည်အခြားအချက်များအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့သင်တန်း၏အလွန်ခက်ခဲသည်.
အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားရန်, University College London နှင့် Bristol ကတက္ကသိုလ်ကနေအခြားသုတေသီများနှင့်အတူ (ဤ blog အိမ်ရှင်အဖြစ်သူအ Suzy Gage အပါအဝင်), ငါပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြ တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်အတွက်, အလားအလာအံ့သြစရာတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ. အပေါ်ဒေတာအသုံးပြုခြင်း 2235 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စုဆောင်းဆယ်ကျော်သက် "90 ရဲ့ကလေးများ" အနောက်တောင်အင်္ဂလန်ကနေကစပြီး, ကျွန်တော်တို့တစ်စုံတစ်ဦး၏အသက်အားဖြင့်ဆေးခြောက်အသုံးပြုပြီးလျှင်ဖော်ပြခဲ့သည်မည်မျှကြိမ်အကြားဆက်ဆံရေးမှာကြည့်ရှု 15, တစ်ခုနှင့်အိုင်ကျူစမ်းသပ်အပေါ်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တူညီအသက်အရွယ်မှာပြီးစီးခဲ့. သူတို့သောအခါအရေးကြီးအဆယ်ကျော်သက်လည်းတစ်ဦးအိုင်ကျူစမ်းသပ်သိမ်းယူခဲ့ 8 အသက်အနှစ် (သူတို့ကိုမဆိုဆေးခြောက်အသုံးပြုမှီ), ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကို "ကြက်သားသို့မဟုတ်ဥ" ပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်.
ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုဆေးခြောက်အသုံးပြုခဲ့သောသူတို့အားဆယ်ကျော်သက်သူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အိုင်ကျူစမ်းသပ်မှုအပေါ်ပိုမိုဆိုးရွားဖျော်ဖြေကြောင်းအကြံပြုကြည့်ရှု, မှာသူတို့၏ '' အခြေခံ '' အိုင်ကျူအဘို့အစာရင်းကိုင်ပြီးနောက် 8 အသက်အနှစ်. တောင်မှသူတို့အသာအကြိမ်လက်တဆုပ်စာအကြမ်းဖျင်းသွင်းယူဆေးခြောက်အသုံးပြုခဲ့သူ2ဆေးခြောက်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသောသူထက်အိုင်ကျူရမှတ်အနိမ့်. သို့သော်, ငါတို့သည်လည်းဆေးခြောက်အသုံးပြုခဲ့သောဆယ်ကျော်သက်စီးကရက်အသုံးပြုကြတာကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြကြောင်းမှတ်ချက်ပြု, အရက်နှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ- လူအပေါင်းတို့သည်ဤအချက်များလည်းနိမ့်ဆယ်ကျော်သက်အိုင်ကျူရမှတ်ခန့်မှန်း. အများစုမှာသိသိသာသာကျွန်တော်တို့ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်ဆေးလိပ်သောက်ဖြစ်ဖို့လည်းအများကြီးပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြကြောင်းကိုသိမြင်- 84% ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုအုပ်စုတွင်သူတို့၏အမျိုးအ (အနည်းဆုံးအားအသုံးပြုဆေးခြောက်ရှိခြင်းဖော်ပြခဲ့သည်တဲ့သူ 50 အသက်အရွယ်အားဖြင့်ကြိမ် 15) ထက်စီးကရက်ကိုပိုမိုသောက်သည်ခဲ့ 20 သူတို့၏အသက်တာတွင်အဆ, ရုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 5% ဆေးခြောက်အသုံးပြုဖူးသူမြား၏.
ကျွန်တော်တို့ကစာရင်းအင်းအခြားပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှုန်းထားတွင်ဤကွဲပြားမှုသည်အချိန်ညှိလိုက်တဲ့အခါ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအပြုအမူပြဿနာတွေနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါလက္ခဏာတွေအပါအဝင်အခြားအချက်များနှင့်အတူ, ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုမရှိတော့ပါနိမ့်အိုင်ကျူရမှတ်ခန့်မှန်း. ဒီညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးအုပ်စုဆေးခြောက်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသောသူတို့အဖို့မကွဲပြားအိုင်ကျူရမှတ်ခန့်မှန်းခဲ့. ငါတို့သည်လည်းအတူတူပင်ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ကျောင်းကအားနည်းခဲ့သော UK အဆင့်မှာကြည့်ဖို့အလားတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့ပွေးလေ၏, သောသူတို့သည်အသက်အရွယ်မှာထိုင်လျက် 15/16. အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်ကျူတွေ့ရှိချက်ဆင်တူခဲ့ကြ- ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကအားနည်းခဲ့သော UK မှာအနိမ့်တန်းအောင်မြင်စဉ် (၏ညီမျှသော2တဦးတည်းဘာသာရပ်အပေါ်အဆင့်နိမ့်), ငါတို့သည်နောက်တဖန်ဤသူတို့သည်အခြားဆက်စပ်အချက်များဆေးခြောက်သုံးစွဲမှု၏ခန့်မှန်းပိုဆိုးကျောင်းတွင်စွမ်းဆောင်ရည်အကောင့်ကိုယူတစ်ချိန်က.
ဒါဟာဆယ်ကျော်သက်ဤအုပ်စုနှစ်စုအကြောင်းကိုအခြားအရာတစ်ခုခုရှိကွောငျးထို့ကြောင့်ပုံရသည် (အသက်အရွယ်အားဖြင့်ဆေးခြောက်အသုံးပြုခဲ့သောသူတို့အား 15 မသူနှင့်ထို) ကအိုင်ကျူနှင့်ကျောင်းအဆင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်, အစားသူတို့ရဲ့ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုထက်, ဒါကြောင့်အဘယျသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးင်သော်လည်း. စီးကရက်ဆေးလိပ်တစ်အလားအလာအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပေမယ့်, ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင့်အမှန်တကယ်အနိမ့်အိုင်ကျူနှင့်ကျောင်းစွမ်းဆောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရှိမရှိလေ့လာမှု၏ဤအမျိုးအစားမှမသိနိုငျ, နှင့်ဤကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုတခြားနေရာနည်းနည်းအထောက်အထားရှိပါတယ်.
ဒီသူတို့အားအဘို့ကြီးသောသတင်းကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါနေစဉ် 15% ၏ 15-24 နှစ်အရွယ်ဥရောပတိုက် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင်ဆေးခြောက်အသုံးပြုကြသူ, အယူအိမ်မှာသတင်းစကားကိုဝမ်းနည်းစွာဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြတ်မဖြစ်. ဒီအင်္ဂလန်၏တဦးတည်းဧရိယာ၌တဦးတည်းကစပြီးမှည့်တဦးတည်းလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်, နှင့်စက္ကူစာရေးဆရာအဖြစ်ကြှနျုပျတို့သညျဤအလုပ်၏ကန့်သတ်မှုဝန်ခံဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်း, ကျွန်တော်တို့အိုင်ကျူကိုတိုင်းတာသည့်အခါသင်တန်းသားများ၏ငယ်ရွယ်စဉ်အပါအဝင်, နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှု၏အတော်လေးအလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်.
တစ်ဦးက ကောင်းစွာ-public မှလေ့လာမှု 2012 ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စတင်ပြီးနှင့်လယ်ပိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းသို့မွဲအိုင်ကျူကျဆင်းမှုမှဆက်စပ် "ဖြစ်ပါတယ်" ကြောင်းအကြံပြု. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကဤအလားအလာဆန့်ကျင်တွေ့ရှိချက်အတူတူ fit ပါဘူး? အကြားအဓိကသော့ချက်ခြားနားချက် ထို 2012 လေ့လာချက် နှင့်ငါတို့ဥစ်စာလေ့လာမှုမှာပါဝင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အပြင်းထန်ဆုံးသုံးပြီးဆယ်ကျော်သက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အဘို့ဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြုခဲ့2နှစ်ပေါင်း, အနည်းဆုံးဆေးခြောက်အသုံးပြုခဲ့ 50 ကြိမ်အသီးအသီး (ပေမဲ့ 57% ဤအုပ်စုများ၏အနည်းဆုံးဆေးခြောက်အသုံးပြုပြီးလျှင်ဖော်ပြခဲ့သည် 100 ကြိမ်). ထဲမှာ 2012 လေ့လာဖို့အများဆုံးသိသိသာသာအိုင်ကျူကျဆင်းမှုပြသသောသူတို့မူနှောင်းပိုင်းတွင် 30 ရက်ရဲ့သည်အထိမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေနာတာရှည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကခဲ့, နှင့်သူတို့၏အသက်တာ၌မြောက်မြားစွာအချက်များမှာဆေးခြောက်စွဲရောဂါခဲ့. ဒါကြောင့်ဆေးခြောက်စွဲဖြစ်နိုင်သောင်, အစား se နှုန်းဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုထက်, အနိမ့်အိုင်ကျူနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်, ဤအဆိုးကျိုးများကိုရှိသည်ဖို့ဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်လေးလံသောဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုကိုသင့်တစ်သက်တာလုပ်နိုင်တစ်လျှောက်လုံး.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကိုအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့အဓိပ္ပါယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အားကြီးသောသက်သေအထောက်အထားရှိရှေ့တော်၌မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပျက်ဆီး ပတ်သက်. ကောက်ချက်မှဖြစ်စေလမ်းခုန်သောအခါကြှနျုပျတို့အားလုံးပိုပြီးသတိထားဖြစ်သင့်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြထားဘူး. အလွန်အမင်းဆေးခြောက်၏အလားအလာဆိုးကျိုးများကိုအကြောင်းကိုမာန်ကောက်ချက် unscientific ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မပြည့်စုံသောအထောက်အထားများကိုအခြေစိုက်စခန်းအပေါ်အခြေခံပြီး. ဤအဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် မမျှတမှပစ်ပယ် ဆေးခြောက်ကိုသုံးသောသူဆယ်ကျော်သက်များ၏, ကျနော်တို့လိုပြီးခဲ့သည့်အရာအရာဖြစ်ပါသည်, ဒီအဖွဲ့ကလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အန္တရာယ်အရှိဆုံးအချို့ကိုပါဝင်ဖွယ်ရှိကြောင်းပေးထား.
ကို Claire Mokrysz ဦးမှာပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်niversity College London မှဆယ်ကျော်သက်ဆေးခြောက်နှင့်အရက်သုံးစွဲမှုကနေထိခိုက်စေရန်အထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး.
31226	1 အပိုဒ်, Blogposts, ဆေးခြောက်, မူးယစ်ဆေးဝါး, သိပ္ပံ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို, အထောက်အထား Sifting, Society က
← ကော်ပိုရိတ်ပွဲများများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်သောက်အကြံပြုချက်များ VPN ကိုသုံးစွဲသူများအပေါ် Netflix နဲ့ကြေညာချက်များကိုအရေးယူ ! →